Thwebula AIMP 4.12.1880 – Windows – Vessoft
AIMP – umdlali audio esekela iningi takhiwo audio. Isofthiwe inikeza sokudlala eliphezulu amafayela alalelwayo esebenzisa processing umsindo ezingeni elifanele. AIMP ikuvumela ukuba basebenze ngayo uhlu lwadlalwayo multiple, ukuphatha amafayela akho umculo nasekuziphatheni kwabenzi izibalo sokudlala. Isofthiwe iqukethe Equalizer esakhelwe ngaphakathi kanye nesethi nemisindo. AIMP uyakwazi ukuguqula ngetakhiwo audio bese uhlela ngetakhiwo eziyisisekelo tags. Futhi AIMP has a module okhethekile ukuxhuma amathuluzi eyengeziwe futhi bandise ukusebenza umdlali.
Usekela iningi takhiwo audio
Sebenza nge Izinhl zam multiple
Ukuguqulwa takhiwo audio
Amazwana on AIMP:
AIMP Ahlobene software:
Abadlali Media An kulula ukuyisebenzisa isidlali okulalelwayo isekela takhiwo athandwayo. Isofthiwe ikuvumela ukuba ulalele umsakazo inthanethi futhi ashise umculo disc.
English, Українська, Français, Deutsch... Kodi 17
Zokuham video Abadlali Media Ithuluzi ukuguqula ikhompyutha yakho ibe isikhungo abezindaba noma ekhaya yemidlalo. Isofthiwe kusekela elawulwa kude futhi likuvumela ukuxhuma anezele.
Abadlali Media Umdlali ukudlala amafayela nabezindaba a high inhlanganisela yezimpawu enkulu amathuluzi for kwamukeleke. Futhi isofthiwe isekela umsebenzi lokudlalisa emfudlaneni video.
Abadlali Media Umdlali okuphelele ukudlala amafayela alalelwayo video. Futhi umdlali isekela ukudlala of podcast iziteshi zomsakazo.
Abadlali Media Player Apple ukudlala amafayela alalelwayo nama-video. Isofthiwe ikuvumela ukubuka ukusakaza video futhi ngezifiso izinga ukudlala ukusakaza.
Abadlali Media Umdlali Elula ukudlala amavidyo ku MKV format. Isofthiwe isekela izici standard futhi ikuvumela ukuba adale noma ukuhlela uhlu lokudlalwayo.
Abadlali Media Isofthiwe ukudlala jingles, izimakethe kanye nemisindo. Futhi isofthiwe kwenza ukudlala amathrekhi audio amaningi.
Download Master 6.11.1.1535 Standard futhi Portable
Internet Easy ukusebenzisa generator key for the routers of izinhlobo ezahlukene. Isofthiwe kwenza ukuba ukuqaqa iphasiwedi network Wi-Fi kusetshenziswa database ezithile onobuhle ezithile of the routers.